को होला त पहिलो गैह्र आवासिय नेपाली ? :: NepalPlus
को होला त पहिलो गैह्र आवासिय नेपाली ?
प्रवासी नेपाली भन्ने त धेरै पहिले देखिनै हो सुन्न थालेको । मलाया, हङकङ, बेलायत र बर्मा लगायतका मूलुकमा नेपालीहरु लडाईमा जान थालेपछि यो शब्दले ब्रिहद रुप लिए जस्तो देखिन्छ । तर नेपालबाहिर नेपालीहरु जाने क्रम भने निकै वर्ष पुरानो हो । पछिल्लो समयमा नेपालीहरु यति धेरै बाहिर गएकि थुप्रै देशमा नेपालीका बस्तीनै भैसकेका छन् । नेपाली मन्दिर, नेपाली ढाँचाका घर र बौद्द गुम्बाहरु बिदेशमा निर्माण हुनु सामान्य भैसके । खासगरि गैह्र आवासिय नेअपली संघको गतिबिधी तिब्र बन्न थालेपछि प्रवासी नेपालीहरु भन्दा गैह्र आवासिय भन्ने नाम बढि चर्चामा आएको देखिन्छ । आज विश्वभर नेपालीहरु फैलिए। तर पनि एउटा जिज्ञासा भने सबैलाई लाग्न सक्छ, नेपालीहरु प्रवासिने क्रम कहिलेदेखि शुरु भए होला ? र नेपालको पहिलो गैह्र आवासिय नेपाली को होला ?
मार्च महिनाको १५ तारिख पेरिसमा भएको एनआरएनको ब्रिहद भेलामापनि यो विषयमा केहि चर्चा भएको थियो । नेपालीहरु बिदेशिने क्रम लिच्छवी कालदेखिनै शुरु भएको र नेपाली कलाकार अरनिको तिब्बत पुगेको प्रसंग उठ्यो । हाम्री राजकूमारी भ्रिकूटीपनि त्यहि बेलामा तिब्बतका राजकूमारसित बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर गैह्र आवासिय नेपाली बनेको चर्चा पनि चल्यो ।
जेहोस, गैह्र आवासिय नेपालीहरुको ईतिहास लामो ठानिँदैन नेपालमा । यदि अरनिको र भ्रिकुटीलाई नेपालका गैह्र आवासिय नेपाली मान्ने हो भने प्रवासी नेपालीहरुको ईतिहास धेरै अघिदेखि शुरु भएको मान्न सकिएला । वा अरनिको र भ्रिकुटीभन्दा पहिलेपनि कुनै नेपाली बिदेश गएका थिए कि ? यस विषयमा तपाईहरुलाई के छ जानकारि राखिदिए चाखलाग्दो नै होला कि ?
– (पहिलो तस्बिरमा सबैभन्दा दाहिने तिब्बतकी राजकुमारी वङचेङ, बिचमा स्रङचङ गम्पो र सबैभन्दा देब्रे नेपालकि राजकुमारी भ्रिकुटी) ।
-दोस्रो तस्बिर चाहिँ नेपाली कलाकार अरनिको को हो ।